माओवादीको बलियो खम्बा ढल्यो, ठूलै नेता एमाले प्रबेश गर्दै, को हुन् उनि ? — Sanchar Kendra
माओवादीको बलियो खम्बा ढल्यो, ठूलै नेता एमाले प्रबेश गर्दै, को हुन् उनि ?
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य भएका ठम्मर विष्ट नेकपा (एमाले) प्रवेश गर्ने भएका छन्। आइतबार दिउँसो साढे १२ बजेबाट सुरू हुने एमालेको बृहत कार्यकर्ता भेलामा सहभागी भएर उनी एमालेमा समाहित हुन लागेका हुन्।
विष्टलाई नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पार्टीमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए।
सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र १ (क) बाट प्रदेश सांसदमा निर्वाचित विष्टले केही दिनअघि संसद, संसदीय दल र पार्टीबाट राजीनामा दिएका थिए। सांसद पदबाट दिएको राजीनामा पत्रमा उनले शनिबार मात्र हस्ताक्षर गरेका थिए।
यता माओवादी केन्द्रको प्रदेश सभा संसदीय दलले उनलाई निष्कासन गरेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेको छ। यसअघि संसदीय दलले उनलाई राजीनामा फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशनपछि पनि माओवादीबाट अलग्गिएको घोषणा गरेपछि उनलाई सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बन गरिएको हो। विष्ट माओवादी प्रदेश सभा दलका प्रमुख सचेतक समेत थिए।
उनले पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्वको गतिविधि अलोकतान्त्रिक भएको हुँदा पार्टी छाडेको बताएका छन्। यस्तै आफूले आफ्ना शुभेच्छुक कार्यकर्ताहरूलाई पनि एमालेमै आउन भनेको बताए।
‘पछिल्लो समय मेरो परिश्रम रहेको पार्टी र नेतृत्वको गतिविधि लोकतान्त्रिक छैन। मैले मेरा शुभेच्छुक कार्यकर्तालाई पनि एमालेमा आउन भनेको छु,’ उनले भने।
यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादी केन्द्र एक नम्बर पार्टी हुने सम्भावना बढेको दाबी गरेका छन् । देशव्यापी निर्वाचन अभियानमा रहँदा देखिएको जनताको उभारले त्यसको संकेत गरेको प्रचण्डले बताए ।
‘२०६४ सालको चुनावमा ५ सिट जित्छ माओवादीले भन्थे ठूला दलहरूले । कहिले १० सिटसम्म भन्थे । तर, झण्डै बहुमत दिए, जनताले ।
प्रत्यक्षतर्फ त बहुमतै हो र अहिले २०७९ मा पनि सबैतिरको स्थिति हेर्दा हामी पहिलो पार्टी हुने सम्भावना बढिसक्यो,’ प्रेस सेन्टर कास्कीले पोखरामा आज बिहान आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले भने ।
उनले संविधान र लोकतन्त्र बचाउँदै उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायको अधिकारको पक्षमा उभिएको दल माओवादी भन्ने जनताले बुझेको बताए । सोही कारण मधेस प्रदेशदेखि जताततै माओवादीमा जनताको उभार आएको उनको भनाइ छ ।
‘मधेसको ४/५ वटा जिल्ला गएँ । एउटै जिल्लामा हजार/१२ सय जना शिक्षक बुद्धिजीवी माओवादीमा प्रवेश गर्नुभएको छ,’ प्रचण्डले भने,‘हिजो सिन्धुलीमा धेरै मानिस प्रवेश गर्नुभएको छ ।
साथीहरूले पहिलो पार्टी हुने भन्नुभएको छ, त्यो पनि विश्वासिलो आधारले ।’ उनले माओवादीलाई कसैको वैशाखी आवश्यक नभएको र आफ्नै बलमा निर्वाचन लड्ने बताए ।